Tobọchị ịmalite, nke a bụ Xiaomi Mi Band 5 | Gam akporosis
La Xiaomi Mi Band 5 apụtawo na awa ole na ole gara aga ya na nhazi ya ekele ụfọdụ onyonyo nke ya teas. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru oke otu esi bụrụ usoro ọhụụ nke usoro a nke na-enye ọ joụ dị ukwuu maka akara ndị China.
Anyị nwere mbụ oyiyi kemgbe teaser nke smart mgbaaka na ụdị ọ bụla ọ bụla nke afọ ọ bụla na-abịa na ụfọdụ ihe ọhụrụ nke na-aghọ ihe ngọpụ kachasị mma iji ree nke ochie ma gbanwee nke ọhụrụ.
N'ezie ma ọ bụrụ na anyị ejiri ụdị ihe atụ a tụnyere nke gara aga, Mi Band 4, enweghị nnukwu ọdịiche, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Ọ bụ na ọla aka ebe imewe na-agbasa. Ọ bụ na mbụ mgbanwe kasịnụ mmadụ nwere ike ịhụ mgbe ọ na-etinye na Xiaomi Mi Band 5 ọhụrụ, otu anyị si agbakwunye mgbaaka ahụ na nkwojiaka anyị.
Enweghị ụzọ dị mma iji lee Mi Band 5 ọhụụ karịa site na teaser a ebe egosipụtara ihe niile gbasara ya mgbaaka ohuru nke ga eme august n'oge ọ na-oru; ebe ọ bụ na ọ bụ mgbe nile onye sonyere na nke kacha mma uru maka ego, na-amanye ndị ọzọ ụdị na-emepụta yiri ngwaahịa ka ọ ghara ịhapụ achicha dum ya.
Ọ bụrụ na anyị aga ozi ọma na sọftụwia ahụ, o doro anya na ọrụ ọhụụ yana na ọ nwere metụtara ụmụ agbọghọ inwe nhazi oge site na mgbaaka gị. Ihe ọhụụ ọzọ metụtara akara ngosi pọtụfoliyo ahụ, ọ bụ ezie na nke a ga-anọ na China.
La New Xiaomi Mi Band 5 smart mgbaaka ga-oru na China na June 11, ya mere, ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu anyị abịa na ozi zuru oke nke ngwaọrụ ọhụrụ a ka ịdekọ egwuregwu na obere ihe ndị ahụ masịrị anyị nke ukwuu; N'agbanyeghị echefula ngwa a ka ịdekọ eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ Xiaomi Mi Band 5: onyonyo izizi, ọla aka ọhụrụ na nlekota oge